တိုတောင်းသောလက်ကိုင်, clutch, စာအိတ်, လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး, ကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူပခုံးအိတ်, - အမျိုးသမီးဖက်ရှင်စတုရန်းအိတ်
ရင်ပြင်အိတ် - ဝတ်ဆင်ဖို့နဲ့ဘယ်လိုဖက်ရှင်ပုံရိပ်ဖန်တီးအဘယ်သို့ဖြစ်ကြသည့်?
သူတို့သာလေးနက်၏လက်၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ် Square ကိုအိတ်ရှည်လျား, စီးပွားရေးစတိုင်က Element ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ။ ယနေ့တွင်အခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ဤမျိုးကိုမဆို stylist သေဒဏ်စီရင်၏နိုင်ပါတယ်။
တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသူအသေးဆုံးအသေးစိတ်ရန်သင့်လမ်းစဉ်းစားရန်, ကောင်းသောကြည့်ဖို့လိုသည်။ အထူးသဖြင့်, တစ်ဖက်ရှင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ကိုဖန်တီးရန် 'နှင့်လိုအပ်သောသောအရာတို့ကိုသိုလှောင်များအတွက်စတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလိုအပ်ပါသည်။ မကြာခဏလှပသောမင်းသမီးအမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမူရင်းအသွင်အပြင်ရှိပြီးအရာရင်ပြင်, ဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့သောဆောင်းပါးများကိုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့စုံစုံနှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်းနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောအင်းလေးရှိနိုင်ပါသည်။
ကြော့စတုရန်းအိတ်, ကျောပိုးအိတ် - ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းသုံးစွဲဖို့ရှိသည်သောသူတက်ကြွသောအမျိုးသမီးများ၏၏စုံလငျရှေးခယျြမှုအထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ဍာန်ရန်, အလွန်စတိုင်နှင့်မူရင်းကြည့်ရှုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤအမှုကိုလက်အခမဲ့နှင့်ပုံမှန်အိမ်မှုဝေယျာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လွယ်ကူခွင့်ပြုပါတယ်။ အိတ်ကျောပိုးအိတ်ဝတ်ထားလှပတဲ့သွားအရပ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သောသင့်လျော်သောဝန်ဖြန့်ဖြူးအားပေးအားမြှောက်။
Square ကိုကျောပိုးအိတ်အိတ်ကွဲပြားခြားနားသော stylist ကွပ်မျက်ရှိစေခြင်းငှါ, သို့သော်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏မော်ဒယ်များအများစုအလွန်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့စုံစုံရှာဖွေပါ။ ကြောင့်ခက်ခဲအနားနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံသဏ္ဍာန်ထိုထုတ်ကုန်အများဆုံးကိစ္စများတွင်မှလေ့လာနှငျ့အလုပျဖို့အသုံးပြုနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့အပေါ်မှာအလှဆင်ဒြပ်စင်၏နံပါတ်သုညကြတယ်။ ထို့ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး option ကို - ရှေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြီးမားသောသတ္တုသော့ခတ်နဲ့အနက်ရောင်စတုရန်းအိတ်-ကျောပိုးအိတ်။
အစဉ်အလာစတုရန်း-shaped အိတ်ကသူ၏ဝန်ဆောင်မှုအဘို့ထိုသူတို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဝတ်ဆင်ရန်သူ, စီးပွားရေးအမျိုးသမီးများ, များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ဤအဆက်စပ်ပစ္စည်းအမြဲအရှိဆုံးတင်းကျပ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့ crumple ပါဘူးစက္ကူရင်ဆိုင်နေရနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာမေလတွင်ပင်ပလပ်စတစ်နဲ့ပလပ်စတစ်ဖိုင်တွဲများ၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲ, မူရင်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကတည်းက။
ယနေ့အထိ, စတုရန်းအိတ်, ခေတ်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိန်းမနှင့်လည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များအိတ်ကိုယ်စီကိုင်ထား။ သူတို့ကအရမ်းစတိုင်ရိုးရှင်းပြီးကြော့ကြည့်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏ပုံသဏ်ဌာတစ်ဦးအစိုင်အခဲများနှင့်အထင်ကြီးပါစေ။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ရှိသမျှသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, မိတ်ဖက်များနှင့်ပြိုင်ဘက်အပေါ်လိုအပ်သောစှဲစေနိုင်သည်နှင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အလိုရှိသောအထွဋ်အောင်မြင်ရန်။
ဓမ္မပွဲအခမ်းအနားအတွင်းမှာတော့တိုင်းဖက်ရှင်ဟာထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုအသေးစိတ်အတွက်ထွက်ချထားရပါမည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏အသွင်အပြင်၏, လက်ကိုင်အိတ်ဖြစ်လာလှပသောအမျိုးသမီး၏အမြင်မူတည်နှင့် accessories များမှားရွေးချယ်ရေးလုံးဝတပြင်လုံးကိုဖက်ရှင်ကြည့်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ဝေရန်ရည်ရွယ်အားလုံးနီးပါးထုတ်ကုန်, ဤမျှလောက်များစွာသောမိန်းကလေးတွေသူတို့ရပ်နိုင်သောမူရင်းရွေးချယ်စရာကိုရွေးချယ်ပါ, တစ်ဦးစတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်စတိုင်စတုရန်း clutch အိတ်ကြည့်ဖို့ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့။ ဥပမာအားဖြင့်, အလက်ဇန်းဒါး McQueen ကများစုဆောင်းခြင်းအတွက်အဖိုးတန်ကျောက်များနှင့် stylist အမှတ်တံဆိပ် Halston အမွေအနှစ်လုပ်ထားတဲ့အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့အလှဆင်, ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အနီရောင်တောက်တောက် clutch တင်ပြသံချပ်ကာရက်၏ရွှေစလွယ်ကိုဆွဲတင်ကြ၏ရာ၏ရှေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အနက်ရောင် cowhide လုပ်ထားတဲ့အလွန့်အလွန်လှပသောမော်ဒယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
လက်တော်၌ရှိပါသို့မဟုတ်လက်မောင်းအောက်မှာယူသွားနိုင်ပါတယ်သောစာအိတ်၏ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်စတိုင်နှင့်မူရင်းကြည့်နှင့်စတုရန်းအိတ်ကို။ ဒီစတိုးဆိုင်၌သင်တို့ကိုလွယ်ကူစွာသင်လိုချင်သောအရာကိုမဆိုရှာတှေ့နိုငျ - "စာအိတ်" ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခါ, သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်တစ်ချက်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီထုတ်ကုန်ကိုသင်စားပွဲပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်အများဆုံးအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများထားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူကြိုက်အများဆုံး option ကိုအလွန်စတိုင်နှင့်ကြော့ရှာဖွေနေသည်စတုရန်းသားရေခတ်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုတောင်းသောလက်ကိုင်နှင့်အတူ Square ကိုအိတ်
တိုတောင်းသောလက်ကိုင်နှင့်အတူအဆင်ပြေအမျိုးသမီးစတုရန်းအိတ် - နေ့စဉ် wear အဘို့ကြီးသော။ စည်းကမ်းအဖြစ်, တကဖြုတ်တာရှည်သိုင်းကြိုးများကပြည့်စုံသည်, ဒါကြောင့်သုံးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်:
အများဆုံးကိစ္စများတွင်တိုတောင်းသောလက်ကိုင်နှင့်အတူ Square ကိုလက်ကိုင်အိတ်ပျမ်းမျှအရွယ်အစားရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအများဆုံးလိုအပ်သောပစ္စည်းပစ္စယ, ဒါပေမယ့်လည်း hairbrush, စာရွက်စာတမ်းများ, မိတ်ကပ်နဲ့မပိုသာထားနိုင်ပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်းသူတို့အထဲ၌စက္ကူနှင့် A4 ဖိုလ်ဒါများသောအားဖြင့်စီးပွားရေးအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေသည့် fit ပါဘူး။
ပခုံးကျော်ဝတ်ဆင်ခံရဖို့လက်ကိုင်အိတ် Cross-ခန္ဓာကိုယ်, မကြာသေးမီကမယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများနှစ်စဉ်တစ်စတုရန်း၏ပုံစံအပါအဝင်ဤထုတ်ကုန်များ၏အသစ်နှင့်မူရင်းမော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုး။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းများလက်အခမဲ့ခွင့်ပြုပါ, ဒါကြောင့်နေ့စဉ် wear များအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမျိုးသမီးစတုရန်းပခုံးအိတ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့ကြည့်ပြီးဖက်ရှင်ပုံရိပ်၏အဓိကအာရုံစိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စတုရန်းအိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ဒီကဗျာအသွင်အပြင် look'u အလေးထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပါးတစ်စတုရန်းအိတ်နှင့်အတူမည်သည့်ပုံရိပ်ကို, သတိမပြုမိမသွားဘူး။ သို့သော်ဤဤအမှုကိုညံ့ဖျင်းအဝတ်အစားဒဏ်ငွေမင်းသမီး၏ဆောင်းပါးနှင့်အတူ coupled ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, မိန်းမတို့အဘို့စတုရန်းလက်ကိုင်အိတ်၏ရိုးရှင်းပြီးတိကျခိုင်မာစွာပုံစံကိုကျေးဇူးတင်တစ်လောကလုံးစဉ်းစားကြသည် - သူတို့ကောင်းစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဝတ်အစားသို့မဟုတ်ဣတ္ဆင်မြန်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အားကစားသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အရာနှင့်ပေါင်းစပ်နေကြသည်။
ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်သေးသေးလေးဒဏ်လက်မှနှင့် minodery စတုရန်းညဦးနှင့်ဓမ္မထုံးစံ၌ဿုံကိုက်ညီနှင့်အမြဲယင်း၏ပိုင်ရှင်အခြားသူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်။ သူတို့တစ်တွေစေမည်ကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ် - ဤအတောအတွင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အလွန်အမင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝစွာအလှဆင်အဝတ်အစားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မဖြစ်သင့် နည်းနည်းအနက်ရောင်ဝတ်စုံ မလိုအပ်သောအလှဆင်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်တစ်ရိုးရှင်းသော monotonous ထုတ်ကုန်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သေးငယ်တဲ့အဖြူရောင်စတုရန်းအိတ်မူရင်းကြည့်ဖို့လိုလားသူတစ်ဦးနုပျိုသတို့သမီး၏ပုံသဏ်ဌာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်လေးလံသည့် packages များသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကင်းရှင်းတစ်ချိန်တည်းမှာ, သင်ချင်နီးပါးဘာမှထားနိုငျသောကွောငျ့မယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေစတုရန်းအိတ်အကြီးစားအရွယ်အစား, စျေးဝယ်များအတွက်စုံလင်သည်။ ဤအတောအတွင်းတစ်ခုအလွန်အကျွံကြီးမားသောအရာဝတ္ထုကြီးမားပြီးသိပ်သည်း၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တခြားအရာနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်သတိထားဖြစ်ရမည်။
ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောအိတ်ထိုးပြီးနှင့်ဇာထိုးပန်းထိုးဆင်မြန်း, ဂန္ဘောင်းဘီနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီ-ဂျပိန်, ကျဉ်းသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များအတွက်ဖြောင့်အဝတ်နှင့်အတူကြီးမြတ်လှပါတယ်။ အဆိုပါ stylist လျှော့နဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အဝတ်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အကြံပြု - ဒီဘာသာရပ်နဲ့စတိုင်နှင့်ဖက်ရှင်လမ်း Making, ကိုယ်ခန္ဓာ၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏အလွန်အကျွံအသံအတိုးအကျယ်ကိုထည့်သွင်းကြပါဘူး။ ဒီ look'a ၏အထက်ပိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်အသုံးပြုပုံအမြောက်အများရှိနိုင်ပါသည် - ကြိုဆိုပါတယ် အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီ oversayz စတိုင်အင်္ကျီ, poncho နှင့်အခြားအလားတူထုတ်ကုန်ကို လုပ်. , ကြီးမားတဲ့ထိုးပြီး။
ရေမွှေး DKNY «အစိမ်းရောင် Apple က "
Dior ပုတီး pusety
တစ်ဦး Scooter ကလေးသည်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Bozbash - ရိုးရာကော့ကေးဆပ်ဟင်းလျာများ၏မူလချက်ပြုတ်နည်းများ
ပင်လယ် buckthorn ဖျော်ရည် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Paella - တစ်အရသာစပိန်ဟင်းလျာများများအတွက်ဂန္စာရွက်
အမြင့်, အလေးချိန်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန် parameters တွေကိုဒါကိုတာဂျွန်ဆင်
ဇနီးက "ပြစ်မှုဆိုင်ရာ၏အလှဆုံး" ဂျယ်ရမီနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းဖောက်ပြန်ပြီးနောက်ကွာရှင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ
အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ဘို့ကျောက်အောက်မှာ Panel ကို
ယောက်ျားညားကြပါဘူးအဘယ်ကြောင့် - တစ်ဦးနဲ့လက်ထပ်ယောက်ျားသည်စိတ်ပညာ
ရှပ်အင်္ကျီ 2017 - မော်ဒယ်များဖက်ရှင်အတွက်ဒီနှစ်ဖြစ်လတံ့သော?